एक साँझ:हुक्का हाउस – Abhishek Khanal – Medium
एक साँझ:हुक्का हाउस
मलाई कहिल्यै पनि मैले धेरै कमाउनपर्छ,घर बनाउनपर्छ, गाडि किन्नपर्छ जस्तो लागेन र अहिले पनि लाग्दैन! बहिनिहरू बिहेवारि भएर लाखापाखा लागिहाल्छन्, बुवाममिको लागि पेन्सन भइहाल्छ जस्तो लाग्छ! यहि सोचले मलाई नोमाड वनाउदैछ । आफुलाई मनलागेको कुरा गर्ने, जता मन लाग्यो त्यता घुम्ने; एउटा स्वतन्त्र पंक्षी ……………
जिन्दगि के हो भनेर बहस गर्नु, उत्तर खोज्न प्रयास गर्नु निरर्थक छ । जिन्दगि कसरि विताउने आफ्नो कुरो हो । म यस्तै सोच्दै हुक्का हाउस छिरेँ। एकछिन अघिमात्र एउटा साथिसंग यहि बिषयमा कुरा गर्दैथिँए । प्लस टु संगै पढेको साथि । जहिले पनि पैसाको मात्र कुरा गर्छ । पैसा जसरि पनि कमाउनपर्छ भनेर सोच्छ । उसको समाजले जे सिकायो, त्यहि सिक्यो होला उसले । प्लस टु पढ्दा पनि यताउता केहि गरेर, कुनै प्रोजेक्ट तिर गएर अलिअलि कमाउथ्यो ऊ । उ कुनै काम केहि कुरा सिक्नभन्दापनि पैसा कमाउन गर्थ्यो र अझैपनि गर्छ । मलाई सबैभन्दा मन नपर्ने, घृणित लाग्ने कुरो यहि हो । त्यसैले जहिले पनि उसंग कुरा हुदाँखोरि यो कुरा चल्नेवित्तिकै वहस रोकिन्छ, अगाडि बढाउने बिषय भेट्दिन म । आजपनि यहि कुरा निस्कियो अनी म मलाई हतार छ, भन्दै उम्किएँ ।
माथि पुगेर चक्लामा पलेटिँ कसेर बसिसकेपछि यसो वरिपरि हेरेँ । जब सोचमा डुबिन्छ तब वरपरका केहि कुरा याद गरिन्न । मेरो छेउमा टिनएज जस्ता देखिने जोडि रैछन्, केटाचाहिँ केटिलाई हुक्का तान्न सिकाँउदै छ । पहिलोपल्ट जस्तो लाग्यो केटिले हुक्का तानेको । यसो वरिपरि हेरेँ माथि बस्ने म त ति जोडिमात्र रैछौ । तलतिर टेबलमा दुइचारजना केटाहरू थिँए । आज त्यति भिड रैनछ । वेटर दाइ आउनुभयो, मुस्कुराउनुभो’! म फिस्स हाँसे । म यहाँ को साप्ताहिक ग्राहक, हप्तामा एकचोटि आँउछु प्रायजसो: र अर्डर प्रायजसो एउटै हुन्छ, लेमन हुक्का, फ्रेन्च फ्राइ र दुइटा ब्ल्याक । हुक्का सकिएपछि एक क्वार्टर ह्विस्कि र दुइटा ब्ल्याक! मैले गित चेन्ज गर्न रिक्वेस्ट गरेँ। कुनै नयाँ पप बज्दैथ्यो । एकछिनपछि गित चेन्ज भयो :
There was Buffalo Soldier in the heart of America,
Stolen from Africa,brought to America ………
Who the ‘eck do I think I am …
हुक्का आइपुग्यो । म बब मार्लिलाई सम्झदै हुक्का तान्न थालेँ ।आफ्नो संस्कृतिलाई धेरै माया गर्ने मान्छे।आफ्नो इतिहास खोज्न सिकाउने गित ।हामि त आफै इतिहास र संस्कृति जलाँउदै छौ आजकाल । एक्कासि विलियम जे सिडिसलाई सम्झिँए । उहिल्यै उसले मोर्डन अमेरिकन कल्चर,सिस्टम र भ्यालुजहरू नेटिभ इन्डियनको कल्चरवाट प्रभावित छन् भनेको थ्यो । तर उसलाई अमेरिकन कल्चरलाई होच्याउन खोजेको आरोप लाग्यो । यहाँ सत्य भन्दापनि अरूले जे सुन्न चाहन्छन्, त्यहि बोल्ने र लेख्नेलाई पुज्ने परिपाटि छ । म जहिल्यै यो पपुलर कल्चरको विरोधी भएँ। धेरैलाई मन पर्ने कुरा मलाई मन नपर्ने । बच्चैदेखिको वानी । फिलिम हेर्दा हिरोभन्दा पनि भिलेन मनपर्ने, हिट गितहरू प्राय मन नपर्ने, वेस्टसेलर साहित्यकारका कृतिहरू हलुका लाग्ने ……। यो एउटा माइन्ड सेट हो र यसलाई चिर्न गाह्रो छ । ब्ल्याक सल्काँए, तानेँ, धुवाँ फालेँ र त्यो धुवाँलाई हेरिरहेँ । कस्तो जोस बोकेर अगाडि बढ्न खोज्छ तर विस्तारै हावामा विलिन हुन्छ धुवाँ । के जिवन पनि त्यस्तै हो? उत्तर छैन मसंग । दिमागका कुनाकुना खोजेँ, उत्तर भेटिन । धेरै प्रयास गरेँ तर सकिन । एक्कासि टाउको दुख्यो । धेरै सोच्न थालेँपछि यस्तै हुन्छ मलाई, एउटा रोगजस्तै हो यो । ह्वस्कि ल्याउन इशारा गरेँ मैले । चुरोटले झन् टाउको दुखाँउछ त्यसैले ब्ल्याकलाई एस्ट्रेमा हाल्दिँए । अलिकति तान्नै बाँकि थ्यो, पछि थकथक लाग्छ लास्ट पफ नतानेकोमा!लागे लागोस् । वेटर दाइले ह्वस्कि र लेमन ल्याएर राख्दिनुभो’ । एकैपटकमा एक पेग स्वात्त पारेँ । अल्लि कम भयो टाउको दुख्न । वरिपरि हेरेँ, सबै आफ्नै धुनमा छन्, रमाउँदैछन् । अहिले अल्लि भिड बढेको छ । छ बजिसक्यो जस्तो छ ।
ह्वस्कि गिलासमा हाल्दै गर्दा म्युजिक चेन्ज भएर लेननको इम्याजिन बज्न थाल्यो । सेकेन्ड पेग सकेपछि अलिअलि रमरम भो’ । टाउको दुख्न छोड्यो । हलुका फिल भयो ।
Living for today ……………
Living life in peace ……
एक्कासि Utopia को बारेमा सोच्न पुगेँ । कस्तो होला त्यो पर्फेक्ट सोसाइटि । म जन्मिने बित्तिकै छोरो भएछ आहा भन्दैनन् होला । क ख ग …पढ्न सुरू गर्नेबित्तिकै बाबु ठूलो भएसि’ डाक्टर बन्ने भनेर घोकाउदैनन् होला । त्यो त दलित हो, संगत गर्न हुदैन भन्दैनन् होला । त्यस्तो धनिको छोरिसंग बिहे गर्दापनि फुटेको कौडिको पनि दाइजो दिएनछन् भन्दैनन् होला । ……भन्दैनन् होला । तर मेरो रूपबाट पो त्यो पर्फेक्ट भो’, मेरो हजुरआमाहरूलाई त्यस्तो समाज मन पर्ला र? अब यस्तो समाजलाई चेन्ज गरेर Utopia बनाउन सकिन्छ र? फेरि टाउको दुख्न सुरू होलाजस्तो भो’ । माइन्डलाई अन्त मोड्नपरो’ । अलिकति बाँकि रहेको ह्विस्कि सकेँ । ब्ल्याक सल्काँए र तलतिर टेबलमा बसेकि सत्र अठार बर्षकि जस्तो लाग्ने केटिलाई हेर्न थालेँ । रातो टप्स, छोटो जिन्स कट्टु, मिलेको जिउडाल, अलिकति क्लिभेज म बसेको ठाँउबाट देख्न सकिन्थ्यो । विस्तारै कामवासना आउन थाल्यो, म एकटकले उसलाई हेरिरहेँ, विस्तारै मनमनै उसका कपडाहरू उतार्न थालेँ, चाहना बढ्दै गयो । उसका नितम्ब, वक्ष र ओठ नियाल्न थालेँ । उ हासिँरहेकि छ, साथिहरूसंग जिस्किरहेकि छ । के उसको बारेमा मैले यस्तो सोच्न सुहाँउछ? एकथरि विचार आयो । अब फेरि कसैको बारेमा सोच्न पनि अनुमति लिनपर्छ र? अर्को विचार जन्मियो । म कामवासना दवाउने पक्ष मा थिइन, भ्यालु र मोरालिटिको कुरो गरेर । उसलाइ एकटक हेरे,यहाँ बसिरहनु उचित लागेन । उठेँ, खुट्टा, हात तन्काँए, पाइन्ट मिलाएँ । काउन्टरको दिदि मुस्कुराउनुभो’, मैले पनि फिस्स हाँस्दिँए । बिल तिरेर गरेर बाहिर निस्कन लाग्दा मलाई दिव्य ज्ञान प्राप्ति भएको जस्तै भान भयो अनि हतार हतार ठमेलतिर पाइला चालेँ ।
Never missastory from Abhishek Khanal, when you sign up for Medium. Learn more
Never missastory from Abhishek Khanal